‘मेयरले हाम्रा कुरा पटक्कै सुनेनन्, मनोमानी गरे’ | नेपाली पब्लिक ‘मेयरले हाम्रा कुरा पटक्कै सुनेनन्, मनोमानी गरे’ | नेपाली पब्लिक
होमपेज / अन्तरवार्ता | राजनीति |
‘मेयरले हाम्रा कुरा पटक्कै सुनेनन्, मनोमानी गरे’
नेपाली पब्लिक २०७६, ९ जेष्ठ बिहीबार १६:२२
राम थापा मगर मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा अब चिनाइरहनुपर्ने नाम रहेन। नेपाली कांग्र्रेसका तर्फबाट थिमि नगरपालिका–२ कोे वडाध्यक्ष बनेका थापा मगरले आफ्नो निर्वाचित कार्यकालको झन्डै २ वर्षको अवधिमा वडाबासीमाझ आफ्नो सशक्त र कर्मनिष्ठ परिचय बनाइसकेका छन्। थापा मगर मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा नगरका अन्य वडाहरूमा विनियोजित बजेटको पूर्णरूपले सदुपयोग हुन नसकेको अवस्थामा वडा नम्बर २ ले भने शतप्रतिशतजस्तै काम गरेर एउटा रेकर्ड कायम गरेको छ। जनताको दैनन्दिनीमा अत्यन्त सजग थापा मगरले विकासनिर्माणमा पनि त्यत्तिकै सजगता अपनाउँदै आएका छन्। कसरी वडाबासीको काम सहज र सरल ढङ्गले गर्न सकिन्छ, त्यसमा थापाको टिम नै लागिपरेको छ। निरन्तर क्रियाशील र कर्मठ युवा वडाध्यक्ष थापा मगर नगरका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठको कामकारवाहीसँग भने निकै नै असन्तुष्ट देखिन्छन्। उनै थापा मगरसँग नेपाली पब्लिकले चालू आर्थिक वर्षको विकासनिर्माणका योजना र तिनको कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर वार्ता गरेको छ। प्रस्तुत छ, वार्ताको सम्पादित अंश:
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लिइएका लक्ष्य कति पूरा भए?
– हामीले लिएको लक्ष्यअनुसार विकासनिर्माणका काम भइरहेका छन्। गतवर्ष हाम्रो बजेट धेरै फ्रिज भएको थियो। त्यसमा केही प्राविधिक समस्या पनि रहे। यस वर्ष भने हामीले जति बजेट बनाउँछौँ त्यसलाई खर्च गर्छौं भनेर १ अर्ब १८ करोड रकमको बजेट बनाएका थियाैँ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरेको सबै बजेट खर्च गर्ने भनेर चालू आवलाई बजेट वर्ष नै घोषणा गर्‍यौँ। तर, यो वर्ष पनि अवस्था त्यस्तै छ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रम पूरा हुने देखिँदैन। तर, हाम्रो वडाको बजेट चाहिँ सय प्रतिशत नै कार्यान्वयनमा आयो।
चालू आर्थिक वर्ष पनि सकिनै लाग्यो। यो अवधिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम के–के भए?
– यो अवधिमा सानाठूला धेरै काम हामीले सम्पन्न गरेका छन्। अब तत्कालै तीन महत्त्वपूर्ण काम गर्दैछाैँ। एउटा, नाट्यश्वरी पार्क निर्माण गर्दैछाैँ। अबको केही समयमै निर्माण कार्य शुरु हुन्छ। यो पार्क निर्माणमा ४ करोड रुपैयाँ लाग्छ। यस वर्ष चाहिँ ५० लाख रकम छुट्याएका छौँ। हामीले पार्क निर्माणको कामलाई सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसमा भ्यू टावरसहितको फनपार्क पनि निर्माण हुन्छ। दोस्रो, मल्टिपर्पाेज कम्युनिटी विल्डिङको निर्माण शुरु गरेका छौँ। त्यो पनि करिब ४ करोड रुपैयाँको योजना हो।
निर्माण हुने भ्यू टावरको स्केच।
त्यसका लागि यस वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। तेस्रो, अहिले सानोठिमीमा अस्थायी प्रहरी चौकी छ। त्यसलाई स्थायी बनाउने छौैँ। त्यसले नागरिकको शान्ति सुरक्षामा सहजता ल्याउँछ। हाम्रै वडामा एउटा ऐतिहासिक शिव मन्दिर पनि छ। त्यो अहिले जीर्ण अवस्थामा छ। त्यसको ऐतिहासिकता र पुरातात्त्विक महत्त्व नबिग्रिने गरी पुनर्निर्माण गर्छाैं। त्यसका लागि उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ। अरू वडास्तरका योजनाहरूको काम सकिने चरणमा पुगिसकेका छन्।
हाम्रो वडामा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। त्यो लगभग सकिने अवस्थामा छ। हामीले चालू आवलाई बजेट वर्ष घोषणा गरेका थियौँ तर नगरका वडाहरूमध्ये हाम्रो वडाले मात्रै त्यो पूरा गर्‍यो। नगरपालिकामै सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने वडा पनि हाम्रै हो। हामीले अहिलेसम्म ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेका छौँ। यस वर्ष वडामा धेरै सहकारी र व्यवसाय दर्ता भएका छन्, घरबहाल कर संकलन भएको छ। स्कूल पनि दर्ता भएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि धेरै वर्षदेखि तिर्नुपर्ने राजस्व वडामा बुझाएको छ। त्यसकारण हाम्रो वडा थिमि नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हो। उक्त रकम नगरपालिकामा दाखिला गर्छौं र बाँडफाँट गर्नेछौँ।
तपाईं नगरपालिकाको प्रवक्ता पनि हो। नगरपालिकाको समग्र बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ?
– नगरप्रमुखले मनोमानी ढङ्गले बजेट खर्च गरे भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ। यसमा सत्यता पनि छ। सडक कालोपत्रे गर्ने भनेर हामीले एकमुष्ट ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्यायौँ। ढल व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ राख्यौँ। खानेपानीका लागि भनेर ३ करोड राख्यौँ। तर, यो बजेट कहाँ, कति र कसरी खर्च गर्ने भनेर सुरुमा छुट्याइएन। त्यो बजेट कार्यपालिका बैठक बसेर बाँडफाँट गर्नुपर्ने थियो तर मेयरले एकलौटी ढंगले कसैसँग सल्लाहै नगरी दामासाहीमा बाँड्नुभयो। हामीले त्यसमा विरोध पनि जनायौँ। यस्तो हुनुहुँदैन भनेर मेयरदेखि प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतसम्मको बारम्बार ध्यानाकर्षण गरायौँ। तर, त्यसको सुनुवाइ भएन। मेयरले हाम्रा कुरा पटक्कै सुनेनन्, मनोमानी गरे।
निर्माण हुने पार्कको स्केच।
यो आर्थिक वर्षमा सबै योजना सम्पन्न हुन्छन् त?
– हरेक वडामा नगरस्तरीय र वडास्तरीय गरी दुई प्रकारका योजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये नगरबाट सञ्चालन गरिएको योजना पूरा नहुने अवस्थामा छन्। प्राविधिक समस्यादेखि कार्यकारी अधिकृतको सरुवा भइरहँदा पनि यो समस्या आएको हो।
त्यसो भए सम्पूर्ण नगरपालिकाको विकास बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन?
– अवश्य पनि सन्तोषजनक छैन। सबैभन्दा बढी विकासनिर्माणका काम मेयरको पुरानो वडा नं. ४ मा भएको देखिन्छ। त्यो ठाउँबाहेक अन्य वडामा त्यो अनुपातमा अन्य वडामा विकासनिर्माणका काम हुन सकेको छैन।
थिमि नगरपालिकामा नेपाली कांगे्रसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दुई तिहाइ बहुमत छ। कांग्रेसबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच पनि विकास निर्माणका विषयमा एकमत देखिन्न, किन?
– हामी नेपाली कांगे्रसको प्रतिनिधित्व गरेर चुनावमा होमियौँ। पार्टीले टिकट दियो र जनताले जिताए। चुनाव जितेपछि हामी कांग्रेसको मात्रै हैन, सबै विचार राख्ने पार्टी र जनताका साझा प्रतिनिधि हौँ, समग्रमा हामी जनताका प्रतिनिधि हाैँ। तर, पार्टीको धारणालाई पनि मान्नुपर्छ। यसैमा केही समस्या आएको छ। अहिले सकारात्मक कुरा भइरहेको छ। कुरा मिल्छ, अब भविष्यमा खासै समस्या हुँदैन। जनप्रतिनिधिले पनि आफूलाई पार्टीका मात्र नभनेर एक खेमा, अर्को खेमाका भन्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। हामीबीच यस्ता खालका वैचारिक असहमति त छ तर विकासनिर्माणका कार्यमा त्यस्तो भएको छैन।
तपाईंले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सके जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?
– देश नयाँ संरचनामा गएका कारण यो वर्ष हाम्रो पनि सिक्ने र अनुभव गर्ने वर्षका रूपमा बित्यो। यो अवधिमा सबैलाई चित्त बुझाउन सकिएन होला, तर हामी इमानदार र दत्तचित्त भएर जनताको काममा लागेका छौँ। विकासनिर्माण र न्याय दिने कुरामा सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने रहेछ भन्ने अनुभव मैले गरेँ। धेरैले आलोचना पनि गर्नुभयो, त्यसलाई मैले स्वभाविक रूपमै लिएको छु।
केही समय अगाडि हाम्रो वडामा सबैभन्दा बढी बजेट २६ लाख रुपैयाँमा बाटो ढलान गर्ने काम भइरहेको थियो। त्यसमा एक स्थानीयको घरको पर्खाल भत्काउनुपर्ने अवस्था आयो। उहाँले मान्नुभएन र अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउनुभयो। पछि छलफलपछि पर्खाल भत्काउन अदालतले आदेश दिएपछि हामीले डोजर लगाएर भत्कायाैँ। तर, उहाँले जनप्रतिनिधिलाई गाली गलौज गर्दै डोजरमाथि ढुङ्गामुढा गर्नुभयो। पछि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि हामीले नै उहाँलाई छुटाएर ल्यायौँ।
हामी त जनताका साझा मान्छे हौँ। जनताको सेवा गर्दैछौँ। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा भन्ने हुँदैन, गरिँदैन। त्यहीअनुुसार नगरबासीले हामीलाई बुझिदिनुपर्‍यो। हामी नगरबासीलाई विकास निर्माणमा हातमालो गरिदिन आग्रह गर्दछौँ। मेरो कार्यावधिसम्म म कसैलाई पनि पक्षपात गर्दिनँ, हुन पनि दिन्नँ। मैले जानेर बुझेर कसैलाई पनि मेरो वडामा बेथिति र ढिलासुस्ती हुन दिन्नँ। कसैले अनियमितता र बेथिति गर्न थाल्यो भने म सदैव त्यसका विरुद्धमा हुनेछु। वडाबासीसँग यो मेरो पुरानै प्रतिबद्धता हो, यसलाई पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु।